Siyaasiyiinta Sweden oo cambaareeyay qaraxii Stockholm | Somaliska
Siyaasiinta kala duwan ee Sweden ayaa cambaareeyay weerarkii argagixiso ee lagu qaaday bartamaha Stockholm. Raysal wasaare Fredrik Reinfeldt ayaa sheegay in aan la aqbali karin wax ka dhacay Stockholm asagoo sheegay in Sweden ay tahay wadan furfuran oo qofkasta soo dhaweeya, asagoo ku baaqay samir inta xaqiiqada oo dhamaystiran laga helayo. Gudoomiyaha xisbiga Social Demokraterna Mona Sahlin ayaa sheegtay "Aad ayay qatar u tahay in xitaa Sweden hada weeraro argagixiso lala beegsaday, dhamaan dadkeenu waxay xaq u leeyihiin in ay amaan dareemaan, waxaan aaminsanahay in aan quwad ka qaadi doono midaan". Xisbiga cagaaran iyo Xisbiga bidixda ayaa sidoo kale cambaareeyay qaraxyada balse ka digay in cunsuriyiintu ay u isticmaalaan weerarkaan si ay danahooda ugu hor mariyaan oo ay bulshada naceyb ka dhex abuuraan. Safaarada maraykanka ayaa sidoo kale cambeeraysay weerarka. Wararkale oo ka baxsan mowduucaan ayaa sheegaya in qof ka tirsan militariga Sweden uu ka war haayay weerarka ka hor inta uusan dhicin, qofkaan ayaa fariin u diray mid ka mid ah asxaabtiisa asagoo uga digay in uu ka dheeraado agagaarka Drottninggatan oo ah goobta qaraxu ka dhacay.
Siyaasiinta kala duwan ee Sweden ayaa cambaareeyay weerarkii argagixiso ee lagu qaaday bartamaha Stockholm. Raysal wasaare Fredrik Reinfeldt ayaa sheegay in aan la aqbali karin wax ka dhacay Stockholm asagoo sheegay in Sweden ay tahay wadan furfuran oo qofkasta soo dhaweeya, asagoo ku baaqay samir inta xaqiiqada oo dhamaystiran laga helayo.
Gudoomiyaha xisbiga Social Demokraterna Mona Sahlin ayaa sheegtay “Aad ayay qatar u tahay in xitaa Sweden hada weeraro argagixiso lala beegsaday, dhamaan dadkeenu waxay xaq u leeyihiin in ay amaan dareemaan, waxaan aaminsanahay in aan quwad ka qaadi doono midaan”.
Xisbiga cagaaran iyo Xisbiga bidixda ayaa sidoo kale cambaareeyay qaraxyada balse ka digay in cunsuriyiintu ay u isticmaalaan weerarkaan si ay danahooda ugu hor mariyaan oo ay bulshada naceyb ka dhex abuuraan.
Safaarada maraykanka ayaa sidoo kale cambeeraysay weerarka.
Wararkale oo ka baxsan mowduucaan ayaa sheegaya in qof ka tirsan militariga Sweden uu ka war haayay weerarka ka hor inta uusan dhicin, qofkaan ayaa fariin u diray mid ka mid ah asxaabtiisa asagoo uga digay in uu ka dheeraado agagaarka Drottninggatan oo ah goobta qaraxu ka dhacay.